"Maynkraft" iyona omunye ethandwa kakhulu imidlalo ye-computer ukuthi abadlali nje kuvula amathuba unlimited. It libhekisela "Sandbox" uhlobo, okusho ukuthi okusalungiswa kungekho indaba ethile, imigomo isethi, okungukuthi, uhlamvu yakho emhlabeni enkulu, okuyinto ke angasebenzisa ukuze sisinde. Ngokucacile, "Maynkraft" izinga lenkululeko cishe esiphezulu - ungasebenzisa cishe noma yini ungathola okuzungezile. Ungakwazi ukwakha izakhiwo, ukwakha izicupho, ukudala amathuluzi nezikhali ezibhekene izitha. Umgomo wakho kuphela - ukusinda. Kodwa ngesikhathi esifanayo kunezinye izindlela umdlalo akuvumela ukuthi ushintshe imithetho ngandlela-thile. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi ukudala amamephu zabo, ziyeza lapho up izimo zabo futhi unikele abadlala ukuthatha imisebenzi ukhonkolo - ke wehlukile imibono zokuqala "Maynkrafta". Lapho kungekho khona imisebenzi, kanye sezwe is ngezikhathi elakhiwe. Futhi yingakho "Maynkraft" ukuhlolwa akuyona esingaphansi ethandwa kuka lo mdlalo - bekhulisa into entsha futhi ehlukene.
Kuyini lokhu ngemva kokubhala isivivinyo?
Kufanele uqale nge ukuze aqonde ukuthi yini ukuhlolwa "Maynkraft". Njengoba wazi, esezingeni umdlalo mephu ngezikhathi elakhiwe, kodwa uma ufuna ungakha ikhadi lakho lokuxhumana - yilokhu kusetshenziswa kuleli cala. Umsebenzisi udala imephu, ukubeka izinto kuso akuthandayo, ubeka imitsetfo ethize - futhi okukhuthaza abanye abadlali ukuzama esandleni sabo futhi sibhekane ngokuphumelelayo imisebenzi. Empeleni, lokhu luwumgogodla noma iluphi uvivinyo "Maynkraft".
Njengoba sekushiwo ngenhla, umenzi ikhadi ubeka imitsetfo ayo njengoba ubona kufanele ukuze bamhlole yayo. "Maynkraft" - kuyinto umdlalo Amazing has lenqwaba amathuba, ngakho kukhona insada cishe engapheli amathuba. Yingakho kufanele kuvinjelwe, ngakho umsebenzisi akakwazi, isibonelo, Maze kwenziwa indlela yakho ophumayo, abhubhise amabhulokhi emhlabeni. It ubeka umthetho ukuthi akavumeli ukusebenzisa amathuluzi futhi abhubhise amabhulokhi - futhi manje hero kumele athole indlela yokuphuma bebodwa, ngaphandle kokusebenzisa namaqhinga emthethweni ukuthi banganikeza ukusebenza "Maynkraft". Ikhadi-test - umdlalo ezithakazelisayo kakhulu ukuthi angakwazi captivate kakhulu.
Nezivivinyo "Maynkraft" kungaba zahlukahlukene kakhulu, kodwa kuyafaneleka ukuthi kukhona izihloko kuyizinto ezivamile. Omunye wabo isivele kuboniswe ngenhla - kungcono Maze. Kodwa yena akuyona kuphela - futhi ngokuvamile kakhulu ungathola amakhadi ukukunikeza tinhlobo letehlukene parkour, ezifana ukugibela intaba noma jumping at kokuwa eliphezulu. zombie apocalypse Kuvamile futhi - in the game kukhona ngomumo izixuku Zombies, futhi udinga ukubaleka ekuhlaselweni kwabo ngazo zonke izindlela, okuyinto kuyajabulisa kakhulu ukukwenza njengoba umbhangqwana noma yonke inkampani.
Indlela ukuqaphela yomdlavuza webele ngendlela efanele usaqala?
Dzheyms Dzhoul: Biography, okutholwe yisayensi